प्रधानमन्त्रीलाई नायिका गौरी मल्लको खुलापत्र, सिंहदरबार र बालुवाटारभन्दा बाहिर पनि नेपाल छ यो कुरा नबिर्सनु,,,हेर्नुहोस्। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
प्रधानमन्त्रीलाई नायिका गौरी मल्लको खुलापत्र, सिंहदरबार र बालुवाटारभन्दा बाहिर पनि नेपाल छ यो कुरा नबिर्सनु,,,हेर्नुहोस्।
काठमाडौँ,मेची महाकाली डट नेट News
ल’कडाउनको सुरुवातसँगै भारतबाट नेपाल भित्रिने नागरिकलाई कैयौं दिन बोर्डरमा बि’चल्ली बनाएर राखियो। कैयन नेपाली त लु’कीलुकी हिंडेरै भए पनि घरमै पुगेर म’र्छौं भनेर हिँडे पनि। कत्तिले धेरै ढिला आफ्नो घर परिवारको मुख हेर्न पाए। त्यस समय यतिसम्म भनियो ‘नेपालमा भित्रेका कोरो’नाको संक्र’मण सबै भारतबाटै आएको’ हो। सत्तामा टिक्न जे पनि बोल्न सकिन्छ ।
आज उनै नागरिक आफ्नो ज्या’न जो’खिममा राखेर भारततर्फ़ जाँदैछन्। यतिबेला चाहिं ती मधुर वाक्य कता हराए ?अरुलाई एउटा औंला देखाउँदा आफुतिर अन्य तीन औंला फर्किरहेका हुन्छन भन्ने उखान यहाँ आएर चरितार्थ भएन र ? हिजो भारतबाट को’रोना नेपाल आएको भन्ने मुखले आज आफ्ना नागरिकहरुलाई ‘ए मेरा प्यारा नेपाली नागरिकहरु, भारतमा को’रोनाको प्र’कोप बढ्दो छ, नेपालमै बस जे गर्न पर्छ हामी गर्छौं’ भनेर किन भन्न सकिरहेको छैन ?
यो मेरो प्रश्न यहाँलाई नै हो। तपाईंको नागरिकको हसियतले येत्ति प्रश्न गर्ने अधिकार हुन पर्छ मलाई। को’रोनाको प्र’कोपसंगै नेपालले कमसे कम आफ्ना नागरिक ए’कत्रित गर्ने मौका पायो। नेपालमै रोजगारी उन्मुख कार्य गर्ने समय आयो भन्ने सबैलाई लागेको थियो, तर यी सब कुराहरुसंग सरकारलाई कुनै सरोकार नै रहेन छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहालाई आफुले बेला कुबेला बोल्नुभएका वक्तब्य ट्रोल भइराख्दा रमाइलो गर्ने माध्यम भइरहेको होला अथवा बानी पनि परिसकेको होला, तर हामी सर्वसाधारणलाइ साह्रै ल’ज्जाबोध हुन्छ किनकि हाम्रो मान्यता जसलाई हामीले अत्यन्त विस्वास गरि देशकै शिर्षस्थानमा राखेका छौं, त्यो व्यक्तित्व हाँसोको हैन गर्वको पत्र बनोस्। बि’डम्बना, त्येस्तो दिन कमसे कम हाम्रो जीवनमा आउन सकेको छैन।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पहिला आफ्नो देश र जनताको अवस्था सुधार्नुपर्यो। सानातिना जस्तो हुन्छ रोजगार दिनतर्फ़ लाग्नुपर्यो। आफ्ना नागरिकको दुःख, समस्या, वि’पद बेरोजगारीले निम्त्याएको मानसिक अवस्थासंग भिज्नुपर्यो किनकि समस्या जबसम्म आफ्नो बन्दैन, त्यो कहिले समाधानतर्फ़ बढ्दैन। यो देश नै तपाईंको घर हो। हामी जनता नै तपाईंका परिवार हौँ।यो कुरालाई आ’त्मसात गर्नुहोस। आफ्नो परिवार छाडेर पलायन हुने रहर कसैलाई हुँदैन, तर आज तपाईंका जनता जानीजानी आगोमा होम्मिन जाँदैछन्, उनीहरुको जीवनको रक्षा गर्ने कर्तव्य पनि तपाईंकै हो। सिंहदरबार र बालुवाटारभन्दा बाहिर पनि नेपाल छ यो कुरा नबिर्सी कार्य गर्नुहोला। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो अति विनम्र याचना छ ।– फेसबुकबाट
यस्तै यस्तै ताजा खबर समाचार र लेखहरु पढ्नको लागि मेचिमहाकाली डट नेट News लाई लाइक तथा फलो गर्नुहोस्।👇️👇️👇️👇️👇️👇️👇️👇️👇️👇️👇️👇️🙏
Previous लेखेर नै कुकृत्य गर्नेहरुको सातोपुत्लो उढाईदिने ज्वाला संग्रौलाले रबिलामीछानेको जन्मदिनमा यस्तो सुभकाना!
Next भो’काएकालाई नारायणी किनारमा निःशुल्क खाना खुवाउदै सामाजिक अभियान्ता…हेर्नुहोस्